China Moto gumbeze fekitori uye vagadziri | Weicheng
Liu GezhuangTwon, Liu Cai Jian musha, Dacheng County, Langfang Guta, Hebei Provinc china
Zvigadzirwa zvekudzivirira moto
Yemukati intumescent isina moto kupfeka yesimbi mamiriro
Kunze kwekunze kupisa kwemoto kupfeka kwesimbi simbi
Non expansive moto retardant unhani wekunze simbi mamiriro
Isina kupfeka moto unodzivirira kupfeka kwezvivakwa zvemukati zvesimbi
Cable moto unodzivirira kupfeka
Kuputika chiratidzo mastic
Moto unodzora bhegi
Moto unodzora tepi
Usazviomesera makemikari plugging zvinhu
Inorganic fireproof plugging zvinhu
Mucheka usina moto
Mucheka unodzora moto
Isina kupisa maturu
Silicone isina moto jira
Utsi keteni remadziro machira
Inopisa moto isina chisimbiso
Kwakavharwa nenyama fireproof chisimbiso
Ichi chigadzirwa chiri nyore kutakura, yakapusa kugadzirisa, inogona kushandiswa nekukasira, uye yakasvibirira kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, isarudzo yekudzivirira moto, kurwisa moto uye kubata kwenjodzi "Zvirinani kusatomboishandisa pane kusave nayo kwechinguva.".
(1) 1 m * 1 m (2) 1.2 m * 1.2 m (3) 1.5 m * 1.5 m (4) 1 m * 1.8 m (5) 2 m * 2 m. Iwo ekare marongero maviri akakodzera kudzima zviwanikwa zvidiki zvemoto, uye iyo yekupedzisira tsananguro yakakodzera kudzima zvihombe zvemoto uye kuputira vanhu kuti vatize. Zvese zvigadzirwa zvakarongedzwa mumoto-unorwisa ruvara tsvuku epurasitiki bhokisi kana tsvuku jira bhegi kuti uwane nyore.
Padanho rekutanga remoto, gumbeze remoto rakavharwa chairo nesosi yemoto, uye sosi yemoto inogona kudzimwa munguva pfupi.
1. Kana paita moto, gumbeze rekutiza moto rakafukidzwa pamuviri kana muviri wechinhu chinofanira kununurwa, kuitira kuti ukurumidze kutiza kubva mumoto, izvo zvinopa rubatsiro rwakanaka rwekuzvibatsira kana kubuda kwakachengeteka kwevanhu . Kana paine tsaona chaiyo yemoto, unogona kupfeka gumbeze remoto, iro rinogona kudzikisa zvakanyanya njodzi yekutsva.
2. Icho chishandiso chekutanga kudzima moto chishandiso chemabhizinesi, zvitoro, zvikepe, mota uye zvivakwa zveveruzhinji.
Gumbeze remoto kurapa kwakakosha kwegirazi fiber twill jira, ine mvere, yakapfava, compact uye mamwe maitiro. Inogona kupatsanura sosi inopisa uye kuputira zvisina kuenzana zvinhu. Gumbeze remoto rinogona kushandiswa kakawanda pasina kukuvara.
Zvakanakira gumbeze remoto ndeizvi: 1. Hapana nguva yekukundikana; 2. Hapana kusvibiswa kwechipiri; 3. Insulation uye yakanyanya tembiricha kuramba; 4. Nyore kutakura. Nekuti gumbeze remoto mudziyo wakapfava wekudzimisa moto, unogona kudzimisa moto neoksijeni nekumhanya kwazvo, kudzora kupararira kwenjodzi, uye inogona kushandiswawo semidziyo yekudzivirira kutiza panguva, saka gumbeze remoto michina yakakosha yemidziyo yekurwisa moto.
Pashure: Chipingamupinyi chemoto
Zvadaro: Inopisa moto isina chisimbiso
Weicheng Moto Kudzivirira Technology Boka Co, Ltd. ikambani yemakemikari iri kuita mukuvandudza uye kugadzirwa kwemidziyo yekudzimisa moto nemidziyo inodzima moto ...
Weicheng Moto Kudzivirira Technology Boka Co, Ltd.